भाग्यमानी सिन्धुवासीः जसले सिन्धुका शान सरेश नेपाललाई मतदान गर्न पाउँदैछन्
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले जति पनि विकासका ‘मोडलहरु’ छन्, जे जति अभियानहरु सञ्चालनमा छन्, त्यसको अगुवाइ सरेश नेपालले नै गरे । यो मानेमा पनि क्षेत्र नम्बर १को प्रदेश सभा २ का जनताहरु भाग्यमानी छन् कि, उनीहरुले मंसिर १० गते यस्तो एउटा जनप्रतिनिधि चयन गदर्दैछन् जोसँग विकासका अनेकन मार्गचित्रहरु कोरेका छन् ।
सायदै सरेश नेपालको नाम नसुन्ने र उनीसँग साक्षत्कार नभएको जिल्लाबासी कमै होलान् । धेरै पटकको चुनावमा धेरै मतदाताहरुले भन्ने गरेका थिए कि– ‘म जुनुसुकै पार्टीको भएपनि सरेश नेपाललाई एक पटक भोट दिने रहर छ ।’ त्यो रहर सबै जिल्लाबासीले यो पटक पाएनन् र त्यसको समग्र प्रतिनिधित्व आम बामपन्थी गठबन्धनका उमेदवारहरु मार्फत नै हुनेछ ।
२०१७ सालमा साविकको पाँग्रेटार गाविसमा जन्मीएका नेपाल को जिल्लामा एउटा परिचय छ, ‘जनप्रेमी जनप्रतिनिधि’ ‘विकासबादी नेता’ हो उनै नेपाल २०४९ सालमा पाँग्रेटार गाविस अध्यक्ष हुदै जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिमा निर्वाचीत भए । २०५४ मा भएको अर्काे चुनावमा गाविस अध्यक्ष हुदै जिविस सभापति भए । यस्तो एउटा जनप्रतिनिधि जसलाई कुनै आरोप लागेन, कतै विकासको बजेटमा आफ्नो हिस्सा खोजेन त्यही भएर त उनी जिल्लाबासीको लागि प्रिय भए अनि एउटा उपमा पाए जनप्रिय नेता ।
१० वर्षे जिविसको कार्यकालमा उनले जिल्लामा थुपै्र विकासको अभियान सञ्चालन गरे, जिल्ला अहिले जुन मोडलमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको जस उनै नेपाललाई जान्छ र गइरहेको छ । पिस्कर आन्दोलमा सहभागी भएबापत तिन वर्ष जेल जिवन बिताए नेपाल मदन भण्डारीले भने झै ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली नै हुदैन ।’ हो यही भनाइलाई आत्मसाथ गर्दे उनी कहिल्यै थाकेनन् निरन्तर जनताको पक्षमा लागि रहे । कहिले भुमी पीडित किसानहरुको पक्षमा वकालत गर्दे हिडे त कहिले अरनिको राजमार्ग बाट पीडित भएकाहरुको लागि निरन्तर लागे । शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन सहित्यक क्षेत्रमा पनि नेपालको राम्रो दख्खल छ ।
जिल्लाको पत्रकारितालाई अघि बढाउन सभापतिको कार्यकालमा निकै सहयोग गरेका थिए नेपालले,जिल्लामा अहिले जुन हिसाबाले पत्रकारिताको विकास भइरहेको छ त्यसको एउटा हिस्सा नेपाल नै हुन् । ‘नेपाल भित्रको सिन्धुपाल्चोक’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेर त्यहाँ भित्र जिल्लाको समृद्धिको सपना कोरेका छन् नेपालले । हो तिनै नेपाल यो पटक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्र्तगत प्रदेश सभा २ मा बामगठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार भएका छन् । उनको सामजिक, राजनीतिक ‘हाइट’को अगाढी प्रतिष्पर्धीहरुसँग तुलना गर्न नै मिल्दैनन् । हो तिनै नेपालको भनाइमा यस्तो छ आफ्नो उमेदवारी,आगामी योजना लगायतका विकासका खाकाहरु
‘हामी यसकारण चुनावमा होमिएका छौं’
हामी चुनाव किन लडिरहेका छौं, चुनाव लड्नुको तात्पर्य के हो ? हामी जित्दा के हुन्छ, हामी हार्दा के हुन्छ ? किसान कसरी हार्छ, महिला कसरी हार्छ, युवाहरु कसरी हार्छन् । राष्ट्रिय स्वाधिनता कसरी हार्छ । हामी जित्दा के हुन्छ र हामी हार्दा के हुन्छ ? कार्यकर्ता पंक्तिमा यो कुरा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यहाँ शरेस नेपाल र अग्नी सापकोटा मात्र हार्ने होईन । न्यायको आन्दोलन हार्छ । जनताको चाहना अनुसारको कम्युनिष्टहरुको एकता र सहकार्य हार्छ । नेपाली जनताको एकता र सम्वृद्धिका सपनाहरु हार्छन् । र त्यो एक जना ब्यक्ति अग्नि सापकोटा जित्ने, शरेस नेपाल जित्ने वा माओवादी केन्द्र जित्ने, एमाले जित्ने होईन ।
हामी हार्दा तपाइँ हामी सबै हार्ने छौं, जित्दा सवैले जित्नेछौं, न्यायले जित्नेछ । कोही संगठित सदस्य हुनुहुन्छ । कोही सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । तपाइँको विचार हार्नु भनेको, राजनीतिमा तपाइँको बर्चस्व हार्नु भनेको न्यायको आन्दोलन तलबितल पर्नु भनेको हामी सवैले हार्नु हो । त्यसैले जिते पनि हामी सवै जित्छौं । विगतको परम्पराबाट माथी उठेर साझा भावना अनि दृष्टिोणका साथ मुलुक बनाउने दृढ अठोट सहित हामी चुनाव लडिरहेका छौं ।
किन बामगठबन्धले जित्नुपर्छ ?
आम न्यायप्रेमी जनता चुनाव लडिरहेका छन् । मुलुकका आम परिवर्ततका पक्षधर, समाजवादका पक्षधर, सिंगो श्रमजिवि जनता चुनाव लडिरहेको छ । यहाँ कोही एउटा ब्यक्ति मात्र चुनाव लडिरहेको छैन । हामी दुईटा एजेण्डामा, दुई वटा केन्द्रिय योजनामा चुनाव लडिरहेका छौं । एउटा हामी राष्ट्रिय स्वाधिनताका निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षणका निम्ति चुनाव लडिरहेका छौं । यो वाम गठवन्धन बाहेक अन्य कुनै शक्तिले राष्ट्रियता जोगाउनेवाला छैनन् । हाम्रा पुर्खाहरुले ठूलो संघर्ष गरेर अनेक लडाइँ गरेर स्थापित गरेको यो राष्ट्रका महत्वपूर्ण चिजहरुलाई जोगाउने यहि वाम गठवन्धनले नै हो ।
स्वाधीनताको लागि हाम्रो लडाईँ
तपाइँ हामीले धेरै बुझेका छौं, हामीलाई थाहा छ । हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं । हामीले बैदेशिक हस्तक्षेपका अनेककहालीलाग्दा शोषण र उत्पीडनका विभेद भोग्यौं । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा माथि विदेशीले आखा गाडेका अनेक घटनाहरु हामीले भोग्यौं । इतिहाँस साक्षी छ, न्यायप्रेमी जनताहरु साक्षी छन् । हामीले धेरै पीडाहरु भोग्यौं । ती सवै पीडामा एउटा यस्तो शक्ति छ जसले कम्युनिष्टहरुलाई कमजोर पारेर यो राष्ट्रलाई चुस्न खोजीरहेको छ । राष्ट्रको सम्पति लुट्न खोजिरहेको छ । हामीलाई थाहा छ त्यही विदेशी तत्वहरु नेपालको संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कतिवटा प्रदेश हुन्छ भनेर उनीहरु भन्न खोजिरहेका छन् । कस्तालाई नागरिकता दिनुपर्छ उनीहरु निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालको भाषा कस्तो हुन्छ उनीहरु निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालको शासकिय स्वरुप र संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनीहरु निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् । हामी भनिरहेछौं, खवरदार हाम्रो देशको कानुन हामी बनाउँछौं । हाम्रो देशको राष्ट्रिय अस्मिताको पक्षमा हामी छौं ।
हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर । हामीमाथि गिद्धेदृष्टि नलाउ भनिरहेका छौं । यो चुनाव यहि बैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धको लडाइँ हो । बैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धको जनमत सँग्रह हो यो चुनाव । विदेशीका दलालहरुले जित्ने की यो देशका राष्ट्रवादी शक्तिले जित्ने भन्ने कुराको फैसला हो यो चुनाव ।
‘कसरी उनीहरु लोकतान्त्रिक भए? यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन होइन’
एकाथरी मान्छेहरु लोकतान्त्रिक गठवन्धन भनिरहेका छन् । के हो लोकतान्त्रिक गठवन्धन ? जसले लोकतन्त्रका बिरुद्ध सँधै अपराध गरिरह्यो, पार्टीका आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रको अनुभुति हुन दिएन । जसले आम श्रमजीवि जनतामाथि शोषण उत्पीडन लादेर मुठीभर सामन्तको हित र रक्षा ग¥यो उहि लोकतन्त्रवादी बन्न सक्छ ? त्यो लोकतान्त्रिक गठवन्धन होइन । त्यो त जनविरोधी गठवन्धन हो ।
न्याय र समानता विरोधी गठवन्धन हो । त्यो अत्याचारीहरुको गठवन्धन हो । नेपालमा लोकतन्त्र समाप्तीका लागि गरिएको गठवन्धन हो । हामीले पशुपति सम्शेरहरु चिनेका छैनौं ? तिनी लोकतन्त्रवादी हुन ? पिष्करका जनताको कत्लेआम गर्ने को हो ? तिनकै षड्यन्त्र होइन ? जनताको रगतमा होली खेल्ने तिनै मान्छे कसरी लोकतन्त्रवादी हुनसक्छ ? हाम्रा मोहनजीका चरित्र हामीलाई थाहा छैन ?
नेपाली कांग्रेसमा तिसौं वर्ष रगत पसिना बगाउने, भोकै हिंड्ने कयौं होनहार नेताहरुको विल्लीवाठ बनाएर टिकटको पसल थापेर बस्ने मानिस लोकतन्त्रवादी ? यस्तो हुन्छ लोकतन्त्र ? दुनियाँ हाँस्दैन ? यस्ता मान्छेको लोकतन्त्रको कथा, लोकतन्त्रको नाटक अब सिन्धुुवासी जनताले पत्याउँदैनन् । यो गलत कुराको पराजय हुनुपर्छ । गलत प्रवृति सिद्धिनुपर्छ र नेपाली जनताको न्यायपुर्ण आन्दोलन नयाँ ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ ।
देश र जिल्लालाई समृद्ध बनाउँछौ
हामी वामपन्थीहरु मिलेर यो मुलुकलाई सम्बृद्धिका दिशातिर लैजान चाहान्छौं । राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षण गर्न चाहान्छौं । यो मुलुकलाई किसानको हितमा , युवाहरुको हितमा, श्रमजीवि महिलाहरुको हितमा आम मेहनती जनताको राज्यव्यवस्था कायम गर्न चाहान्छौ । उनीहरुका निम्ति कानुन बनाउँन चाहन्छौं । जनताका सपना पुरा गर्न चाहन्छौं । हो ति सपनाहरु माओवादी एक्लैले पुरा गर्न गाह्रो भयो, त्यो सपना एमाले एक्लैले पुरा गर्न गाह्रो भयो ।
जनता लामो समयसम्म गरिबी, अभाव र विपन्नताबाट छटपटिए । यहि मध्यक्षेत्रका गाउँबस्तिहरु भुकम्पबाट तहसनहस भए । भूकम्पपीडित जनताले परिवर्तन खोजेका छन्, सुरक्षित जीवन खोजेका छन् । एउटा सुखी जीवनको सपना साँचेका छन् । जनताका तिनै सपना साकार पार्नका निम्ति वामपन्थी शक्तिहरु एक भएका हुन् ।
हामी एक छौ, भ्रममा नपरौँ
हो हिजो अलग अलग ढंगले हामीले पार्टी निर्माण ग¥यौं । हिजो अलग अलग ढंगले हामी अघि बढ्यौं । हिजो हामीबीचमा तिक्तता भयो, प्रतिष्पर्धा भयो । कयौं प्रतिष्पर्धा अस्वस्थ र अमर्यादित पनि भए होलान् । अब ति घटना इतिहासको एउटा कालखण्डमा सीमित भयो । अब हिजोका घटनाहरुको पछि लागेर, हिजोका असमझदारीहरुको पछि लागेको हाम्रो मुलुक बन्दैन । हाम्रो गाउँ बन्दैन । हाम्रो जीवन सुरक्षित हुँदैन, हाम्रो भविष्य बन्दैन ।
हिजोका कुरालाई शिक्षाका रुपमा ग्रहण गरौं, भोलीका भविष्य सार्थक बनाउनका निम्ति नयाँ दृष्टिकोणका साथ एकतावद्ध भएर अगाडी बढौं । यहि सपनाका साथ वामपन्थी शक्तिहरु एक भएका हुन् । यसमा कुनै षड्यन्त्र छैन । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । कुनै दुविधा राख्नुपर्दैन । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेतृत्व एकतावद्ध छ, हामीले एकतावद्ध भएर उमेदवारी दर्ता गराएका छौं । केहि साथीहरुमा शंका छ । त्यो शंकालाई हामी व्यवहारबाट नै खारेज गछौंं ।
व्यवहारबाटै ति शंकालाई अन्त्य गर्छौंं । जनताको सम्वृद्धिका सपना पुरा गर्नका निम्ति कयन तिक्ततालाई भुलेर हामी नयाँ ढंगले अगाडी बढौं । पार्टी नेतृत्वप्रति बिश्वास गरौं ।
हामीसँग छन् विकासका खाका, हामी कोर्ने छौ सिन्धुपाल्चोकको भाग्य
हामीसँग विकासका निश्चित खाकाहरु छन् । हामीसँग गुम्बा, गोल्चे, सेलाङ, हगामा र बराम्ची छ । लेकाली क्षेत्रहरु छन्, त्यहाँ रोजगारी छैन । त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा छैन, त्यहाँ एउटा क्याम्पस छैन । त्यहाँ एउटा हस्पिटल छैन । जनताले डक्टरको अनुहार देखेका छैनन् । एउटा राम्रो सेवा दिने एम्बुलेन्स छैन । बाह्रै महिना गाडी चल्ने सडक छैन । त्यहाँ कयौं पीडा छ, उत्पीडन छ । खेतिपाती परम्परागत छ । जोत्नेहरुका नाममा जमिन छैन । त्यहाँ धेरै कष्ट छ, समस्या छ । त्यसलाई बदल्नु पर्छ । अब विकास र सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।
किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । महिलाका इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनुपर्छ । यो काम कम्युनिष्टहरुले मात्र गर्न सक्छन् । कांग्रेस जस्तो जनविरोधि र गरीवमारा चिन्तन बोकेका, सामन्ती र पुँजीपतिका भरौटे, विदेशीको दलाली गर्ने कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यो कुरा पुरा गर्नेवाला छैन ।
किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । महिलाका इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनुपर्छ । यो काम कम्युनिष्टहरुले मात्र गर्न सक्छन् । कांग्रेस जस्तो जनविरोधि र गरीवमारा चिन्तन बोकेका, सामन्ती र पुँजीपतिका भरौटे, विदेशीको दलाली गर्ने कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यो कुरा पुरा गर्नेवाला छैन । त्यो हामीले मात्र गर्न सक्छौं, प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु । हामीसँग विकासका खाका छन् । यो जिल्ला र प्रदेशको सडक कस्तो बनाउने ? यहाँको शिक्षा कस्तो बनाउनुपर्छ ? यहाँ पीछडिएका समुदायको आयस्तर कसरी उठाउनुपर्छ ? यो गाउँको सम्बृद्धिका निम्ति कस्ता योजना बनाउनुपर्छ भन्ने खाका हामीसँग छ ।
जनताबाट अनुमोदीत हामी नै हौ
अग्नि सापकोटा दुई पटक जनताबाट अनुमोदित भैसक्नुभएको मान्छे । म दुई चोटी गाविसको अध्यक्ष हुँदै एकचोटी उपसभापति र एकचोटी सभापति भैसकेको मान्छे । हामी बारबार जनताबाट अनुमोदित छौं । हामीले गल्ती गरेको भए बारबार चुनाव जित्ने थिएनौं । हामी जनताको दिलमा छौं, जनताको हृदयमा छौं । जनताको मुक्तिका निम्ति निरन्तर संघर्षरत छौं । एउटा कुविण्डे शसस्त्र आन्दोलनको प्रतिक बन्यो ।
अर्को पिस्कर किसान बिद्रोहको प्रतिक बन्यो । पञ्चायती आततयी दमनको प्रतिवाद गर्ने एउटा केन्द्र बन्यो पिस्कर । कुविण्डे र पिष्कर दुइटै जोडीएको छ । एउटा महासागर जस्तै बलेफी र सुनकोसी जोडीएको छ । हामी पार्टीको राजनैतिक र बैचारीक एकतामा समाहित भएका छौं । कार्यकर्ता पंक्तिमा एउटा उत्साह फैलिएको छ । म पनि पिस्कर आन्दोलनमा तिन वर्ष भन्दा बढि जेल बसेको मान्छे, म एउटा आन्दोलनको सहयात्री हुँ ।
हामीले अहिलेसम्म जनताको चित्त दुख्नेगरि कुनै काम गरेका छैनौं । जनताको मन फाट्ने गरि, जनताको स्वाभिमान गिर्नेगरी, जनताको अपमान हुनेगरी कुनै काम गरेका छैनौं, गर्नेवाला छैनौं । प्रतिवद्धता गर्दछु ।
हामी वाम एकतालाई इमान्दारीताका साथ पुरा गछौं । एमालेले जति जति मत प्राप्त गरेको छ त्यसमा बृद्धि गरेर गठवन्धनका उमेदवारलाई भोट खसाल्नेछौं । स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्रले जति मत प्राप्त गरेको छ त्यो मत घट्ने होइन बढाएर गठवन्धनका पक्षमा खसाल्नेछ । हिजो गृहमन्त्री भएकाहरु पनि हारेका छन् ।
पशुपति शम्सेर राणा जन्मेको ५ महिनापछि सुनको थालमा सुनकै चम्चाले खाना खान्थे । देशको छैठौं धनी मान्छे अहिले । तिनै राणाका विरुद्ध हामीले पिस्करको एउटा किसानको छोरो अमृत बोहोराई उठायौं । र पशुपति शम्सेरले हारे, अमृत बोहोराले जिते ।
लडाई जित्नका लागि आत्मबल चाहिन्छ । हामीलाई थाहा छ , यहि शक्ति कुर्सीमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई पराजित गर्ने । मन्त्रीका मात्र के कुरा ? कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री हुँदा कसरी धुलो चाटे हामीलाई थाहा छैन ? जनताको चेतनाले त्यस्ता पद र शक्तिलाई निस्प्रभावी बनाइदिन्छ ।
सुनको थालमा भात खानेलाई हरायौं
पशुपति शम्सेर राणा जन्मेको ५ महिनापछि सुनको थालमा सुनकै चम्चाले खाना खान्थे । देशको छैठौं धनी मान्छे अहिले । तिनै राणाका विरुद्ध हामीले पिस्करको एउटा किसानको छोरो अमृत बोहोराई उठायौं । र पशुपति शम्सेरले हारे, अमृत बोहोराले जिते । यहि न्यायप्रेमी जनता हुन् अग्नि सापकोटा र सुभाष कर्माचार्यहरुलाई जिताउने । तिनै दावा तामाङ र शेरबहादुर तामाङ होइनन ? एउटा गरीवको झुप्रोमा जन्मिएर सुनको थालमा खाने राणालाई निरन्तर पराजित गर्ने ?
ह्याकुला ठूलो छ भन्ने दम्भ नदेखाउ
तिघ्रा र पाखुरा ठूलो छ भन्दैमा, ह्याकुला ठूलो छ भन्दैमा यो शक्तिलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस कसैले नगरे हुन्छ । तिम्रा ह्याकुलालाई हाम्रा क्षमतावान कार्यकर्ताले ठगान लगाइदिन्छन् । राजनीतिक चेतना भएको मान्छेले ह्याकुलाको कुरा गरेर बस्दैन । मन्त्री भएको मान्छे, गृहमन्त्री बन्न तयार बनेको मान्छे, विचार दिँदैन, तर्क दिँदैन, दृष्टिकोण दिँदैन ह्याकुला र पाखुराको चर्चा गरेर बस्छ । यस्ता मान्छेलाई अहिलेको २१ औं शताब्दीका जनताको चेतनाले सिध्याउन पर्दैन ?
यो जिल्लामा तस्करी कसैले गर्छ भने मोहन बस्नेतले भन्ने गर्छन् तिमीलाई तस्करी गर्न मैले सिकाएको । यो जिल्लामा कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने तिनैले प्रश्न गर्छन्, मैले सिकाएको होइन ? भनेर । यो जिल्लामा कसैले जनविरोधी काम गर्छ, गुण्डागर्दी गर्छ भने तिनैले संरक्षण मैले गर्छु भनेर जिम्मा लिन्छन् ।
विकास बजेट खानेले विकासको कुरा गर्न सुहाउदैन नि
विकास बजेटमा लक्षित वर्गको बजेटमा पार्टीको भाग मागेर संस्थागत भ्रस्टाचार गर्ने पनि तिनै हुन् । उनी किसान, महिला, दलित र पीछिडिएका बर्ग चिन्दैनन् । तिनीहरु जिल्लामा संस्थागत भ्रस्टाचारको प्रणेता हुन्, गुण्डाराजको नाइके हुन् । तिनीहरु लोकतन्त्र विरोधी हुन् जनविरोधी हुन् । ब्यक्ति हैन, तिनका प्रवृति र संस्कारप्रति हाम्रो आपत्ति छ । तिनीहरु भ्रष्टाचारका पर्यावाची हुन् । खुमबहादुर खड्का जो अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरि सजायँ भोगेका मान्छे । तिनै खुमबहादुरलाई महान भन्ने यिनीहरु कसरी लोकतन्त्रवादी हुन्छन ? यिनका लोकतन्त्रलाई कसले पत्याउने ? सचेत जनताले पत्याउँदैनन् ।
जनपक्षधरतामा उभिने कि,जनविरोधी कित्तामा ?
हामी भ्रममा नपरौं । हामीमा एकता छ । सद्भाव छ । हामीसँग जनताको अपार ठूलो साथ छ । न्यायप्रेमी जनताहरुका काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । यो धु्रविकरणमा कुन कित्तत्रामा उभिने ? जनपक्षधरताका कित्तामा की जनविरोधी कित्तामा ? देशभक्तहरुको कित्तामा उभिने की देशद्रोहीका कित्तामा ? विदेशी दलालका कित्तामा उभिने की राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा उभिने ? फैसला गर्ने बेला आएका छ । निश्चय पनि जनता सचेत छन्, गल्ति गर्ने छैनन् ।